Kubvira pakagadzwa, Teneng kambani vane zvitengeswa nemazana kugadzirwa mitsetse kuti vatengi, tine pfuma unyanzvi ruzivo. Achitungamirirwa nyanzvi Domestic uye mapurofesa, Teneng chamber kufamba wokumwe michina yemhando yepamusoro, kuchipedza, zvitsva uye kukudziridza kusanduka chando kusikwa ruzivo. Teneng kwakaita arakaitwa API mutopota, motokari, kuvakwa mutopota, fenicha mutopota, mudziyo kugadzira, noruzhowa ukomba, midziyo zvemitambo uye zvichingodaro michina.
ndiro simba hwokugadzira simba uye akakwana basa mugadziriro Teneng kuti rapakona.
Teneng vane 15 zvakagadzirwa mainjiniya uye 80 nekutumwa injiniya, vose vane makore anopfuura 15 mubasa chubhu chigayo indasitiri. tsvimbo Teneng chiri nguva dzose kufamba vaitungamirira kumucheto zvigadzirwa, club achangobuda kuitika chubhu paguyo michina, mukati kudare uye Kuchinja mutengi wacho, kuti zvakagadzirwa mune michina yemhando yepamusoro inoshandiswa zvigadzirwa.